नेकपाका इन्चार्जलाई प्रश्न- साँच्चै बताइदिनुस् न, तपाईहरुले गर्न खोजेको के हो ? — Imandarmedia.com
नेकपाका इन्चार्जलाई प्रश्न- साँच्चै बताइदिनुस् न, तपाईहरुले गर्न खोजेको के हो ?
गएको स्थानिय तहको निर्वाचनमा खारेजीको निती लिएको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीले अव हुन लागिरहेको प्रदेश र प्रतिनिधीको चुनावमा पनि निर्वाचन खारेजीका कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ। खासमा चुनाव खारेजी किन ?
जनताले महसुस गर्ने गरि परिवर्तन कहिले आउला ? पार्टी कार्यालयमा आएका मुद्धाको फैसला कहिले हुन्छ ? यस्तै विषयहरुमा रहेर ने.क पा का प्यूठान जिल्ला इन्चार्ज चिन्तामणी घिमिरेसंग मधुसुदन पोख्रेलले इमान्दार मिडियाका लागि गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश।
तपाईहरुसंगै राजनीतिमा लागेका साथिहरु निर्वाचनको दौडमा लागिरहदा तपाईहरु त्यसको विरुद्धमा हुनु हुन्छ किन ?
हिजो हामी संगै राजनीतिमा लागेका संगै लडेका साथिहरु आज संसदीय दलाल पुजिंवादी राज्यसत्ता अन्तरगत हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कथित निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा जुट्नु भएको छ भने हामीहरु त्यो निर्वाचनको खारेजीको अभियानमा दृढतापुर्वक लागेका छौ ।
गएको निर्वाचनमा पनि उहाँहरुले निर्वाचनलाई उपयोग गर्नु भयो तर हामी खारेजीको अभियानमा सकृय रह्यौ । साथी भनेर मात्र हुदैन जव तपाई संगै हिड्ने साथिले तपाईलाई धोका दिन्छ विश्वासघात गर्दछ भने त्यसलाई साथी भनेर अंगालो हलिरहनु आवश्यक पर्दैन त्यसलाई उसको क्रियाकलाप अनुसार सजाय दिनु पर्दछ ।
माओवादी केन्द्रसंगको हाम्रो संघर्ष,विचार धारा ,राजनीति, सिद्धान्त, दर्शन र आदर्शमा हो । उहाँहरुले कम्यूनिस्ट विचार राजनीति, सिद्धान्त ,दर्शन र आदर्श छोडेर पुजीँवादी धारा समातेपछी संसदिय दलाल पुजीँबादी राज्यसत्तामा चुर्लुृम्म डुवेपछी हामिहरुले उहाहरुसंग सम्बन्ध विच्छेद गरेर क्रान्तिको बाटो समात्न पुगेका हौ । उहाहरुले दलाल पुजीँवादी राज्य सत्तामा पुर्णरुपले आत्मसमर्पण गर्नु भएको छ र उहाँहरुमा कम्यूनिष्ट आदर्श र मुल्यमान्यताहरु अव केहि पनि छैनन् ।
तपाईहरुकै पक्षमा पनि जनमत धेरै देखिएन त ? थवाङमै स्थानिय निकाएको निर्वाचन सम्पन्न भयो । के समिक्षा गर्नु भएको छ ?
जनमत केलाई भन्न खोज्नु भएको हो ? जनमत मापन गर्ने मापदण्ड के हो त ? के संसदिय दलाल पुजीँबादी राज्य सत्ता भित्र हुने चुनावमा प्राप्त मत र चुनाव बाट प्रप्त सिट संख्याको आधारमा जनमत मापन गर्न खोज्नु भएको हो भने त्यसले त सिधै जनमतकै खिल्ली उडाउछ ।
संसदिय व्यवस्था भित्र हुने चुनावहरु कती स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छन भन्ने कुरा विगतको निर्वाचनमा भएका क्रियाकलापले नै बताउछन । त्यस बारे हामीले बोल्नै पर्दैन । देशमा नेकपाको पक्षमा जुन जनमत देखा परेको छ त्यसलाई अवमुल्यन गर्न मिल्दैन् ।
जनताले आफुमाथि भएको शोषण ,दमन र उत्पीडनलाई क्रमश बुझ्दै छन र ने क पा को झण्डामुनी विस्तारै गोलबन्द हुदैछन् । अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाउन सक्ने भएका छन ।
२०७४ सालको वैशाख जेठमा भएको कथित स्थानिय निकायको चुनाव सुरक्षा निकायको घेरा भित्र भएको छ । जुन चुनावमा सुरक्षा संयन्त्रका सवै निकायहरु भरपुर रुपमा प्रयोग भएका छन । सेना, सशत्र, जनपथ र अनुसन्धान यी चार वटै संयत्रहरु पुरै परिचालन गरेर जनतामा एक प्रकारले सन्त्रास र आतंक सिर्जना गरेर जुन चुनाव संपन्न गरियो के त्यो राम्रो हो ?
जनतालाई जर्वजस्ती मतदान गर्न जाने वातावरण सिर्जना गर्नु कति उचित थियो र छ ? यस्को जवाफ संसदवादीहरुले दिन सक्छन् ? थवाङलाई जुन ढंगले अनावश्यक रुपले मिडियामा हल्ला गरियो, त्यो गलत थियो । कालिकोटको मालकोटले मिडियामा ठाउँ नपाउने तर थवाङलाई खोजीखोजी प्रचार बाजी गर्ने कुरा त्यति ठिक छैन ।
तपाईहरुले जनप्रतिनिधिहरुको लिस्टसहित कार्यालय प्रमुखको लिस्ट तयार गर्ने सर्कुलर गरेको ,आर्थिक पहिचानको लिस्ट तयार गरेको भन्ने छ ? चन्दा उठाउने अभियान व्यापक पार्नु भएको हो ?
दलाल र भ्रष्टचारीहरु भन्या को को हुन ? जनताका दुश्मन र मित्र को को हुन ? यी कुरा छर्लङग छन । यहा भ्रष्टचारी र दलाल को को हुन भन्दै धुइपत्ताल खोज्दै लिस्ट बनाउदै हिड्न जरुरी छैन ।
अवको लडाई भनेको पुरानो र नयाँ राज्यसत्ता विचको लडाइ हो । पाटीले जनताबाट चन्दा होइन जनताले नै पाटीलाई आर्थिक सहयोग गर्दछन । हामिले कही पनि कसैसंग जवरजस्ती रुपमा सहयोग लिने गरेका छैनौँ ।
४–स्थानिय चुनाव खारेजीको अभियान, संविधान सभा बहिस्कार अभियान पनि असफल भयो अव कार्यक्रम कसरी सफल बनाउने योजना छ ?
कोही पनि संसदिय व्यवस्थाबाट सन्तुष्ट छैनन । जनतामा संसदिय व्यवस्था र तिनका संचालकप्रति अत्यन्त तिव्र घृणा र असन्तोष व्याप्त छ । दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन बहिस्कार अभियानमा पार्टीले आफ्नो राजनीतिक उचाईलाई कायम गरेको हो । गत स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पार्टीले आफ्नो राजनीतिक श्रेष्ठता हासिल गरेको छ ।
एउटा क्रान्तिकारी राजनैतिक शक्तिको निर्माण भएको छ र एउटा क्रान्तिकारी विचारको जनतामा प्रभाव परेको छ । अवको चुनावमा संसदिय राजनैतिक दलहरु र संसदिय व्यवस्थाको जनविरोधी चरित्र बारेमा भण्डाफोर गरिनेछ र खारेजी अभियानलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाइने छ ।
नागरिक स्तरमा हामीले बुझ्दा तपाईहरुले युद्ध नै गर्नुहुन्छ भन्ने अनुमान छ । साच्चै बताइदिनुस् तपाईहरुले गर्न खोजेको के हो ?
हामिले गर्न खोजेको युद्ध होइन क्रान्ति हो ।क्रान्ति मार्फत जनताको जनसत्ता स्थापना गर्न खोजेका छौ । यसमा यो सत्ताले जवरजस्ती गर्न खोजे प्रतिरोध गरिन्छ ।
एकिकृत जनक्रान्ति भन्दै संसदिय पार्टिले गर्ने जस्ता कालो मोसो दल्ने ,चन्दा नदिएको भरमा गाडि जलाउने जस्ता कार्यक्रमले क्रान्ति हुन्छ ? यो खुलस्त भनी दिनुहोस त ?
हामीले गर्ने कार्यक्रमहरु र संसदिय दलहरुले गर्ने कार्यक्रममा धेरै नै फरक छ । संसदिय दलहरुले भ्रष्टाचारी र दलालहरुलाई कालोमोसो दल्न सकेका छन त ? अह उनिहरुले त्यसो गर्न सकेका छैनन र गर्न पनि सक्दैनन । उनिहरु त दलाल र भ्रष्टचारीसंग मिलोमत्तो गरी भाग बन्डा मिलाउन तर्फ लाग्छन । हामीलाई संसदिय दलहरु संग तुलना गर्न उचित हुदैन ।
गल्ती कमजोरी गर्नेहरुमाथि निगरानी गर्नु हामीहरुको दायित्व हो । हामीले आर्थिक सहयोगको नाममा कसैसग वार्गेनिङ गरेका छैनौ । हामीले हाम्रो पार्टीको नीतिमा रहेर अगाडी बढिरहेका छौ । नेपालमा क्रान्ति सम्भव छ, हुन्छ र त्यसको पहलकदमी हामीले लिनु पर्छ ।
सर्वाहारा किसान मजदुरहरुले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस त कति वर्षमा यिनीहरुको परिवर्तन ल्याउनु हुन्छ ?
यती र उती वर्ष ठ्याकै गणितिय शुत्रमा भन्ने कुरा त भएन ढिलो वा चाडो क्रान्ति हुन्छ नै । क्रान्तिलाई सुदुर भविश्यको विषय बनाइनु हुदैन । जनताको जनवादी सत्ता स्थापाना पश्चात जनताको जनजिवनमा परिवर्तन हुन्छ । जनवादी व्यवस्थामा मात्र जनताहरु अधिकारसम्पन्न हुन्छन् । वैज्ञानिक समाजवादले मात्र समाजमा शान्ति र समृिद्ध ल्याउछ ।
तपाईको कार्यालयमा अहिले पनि दर्जनौ मुद्धा छन भन्ने सुनिन्छ तर एउटा पनि फैसला गर्न सक्नु भएन क्वाडी साढेखोलाकै महिलाले तपाइको कार्यालय धाउन लागेको वर्सौ भैसक्यो कहिले फैसला गरेर न्याय दिनुहुन्छ ?
हो हाम्रो कार्यालयमा जनताबाट आफु अन्यायमा परेका निवेदनहरु आएका छन । हामीले त्यसको विस्तृत र गहन अध्ययन गरेका छौ । हाम्रो जनसत्ता जनपरिषद नेपालले क्रमश ति मुद्धाहरुलाई फैसला गर्ने छ ।क्वाडी साढेखोलाको सम्वन्धमा बस्नेत परिवार अन्यायमा परेको छ । जनपरिषदले त्यो मुद्धाको बारेमा निर्णय गर्ने छ र पिडितलाई न्याय दिने छ ।
यो चुनावमा तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ प्रचारात्मक कार्यक्रम हुन्छ कि कतै बुथमै हमला गर्नुहुन्छ ?
हामीले यो चुनावमा प्रचारात्मक कार्यक्रम गर्छौ । संसदवादी राजनीतिक दलहरुको वर्ग चरित्र र संसदिय व्यवस्थाको जनविरोधी चरित्रको बारेमा जनताको विचमा भण्डाफोर गर्दछौ । जनतालाई चुनाव खारेजी अभियानमा साथ दिन र सहभागी हुन अपिल गर्दछौ ।
यो संसदिय व्यवस्था जनताको व्यवस्था होइन र यो मुठ्ठीभर दलालहरुको हितको प्रतिनिधित्व व्यवस्था हो भन्ने कुरा जनतालाई प्रशिक्षित गर्दछौ । चुनाव खारेजी अभियानलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाउँछौ ।
२०७४ कात्तिक २२ गते प्रकाशित